सरकार प्रति वितृष्णा बढेकै हो त ? जहाँ ज्ञानेन्द्र त्यहाँ "राजा आउ देश बचाउ" को नारा !
काठमाडौँ- अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह मध्य तराईको भ्रमणको क्रममा छन्। पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्रले उपत्यका बाहिरका सर्वसाधारणहरू संगको जनसम्पर्कलाई बाक्लो बनाउन थालेका हुन्।
काठमाडौँमा हुँदा खासै सर्वसाधारणहरूसँग भेटघाट नगर्ने ज्ञानेन्द्र मोफसलमा हुँदा भने जनतामाझ जाने र कुरा सुन्ने गर्दैछन्। धर्मपिठहरुमा पूजा गर्ने, शुभेच्छुकहरूसँग भेट्नमै ज्ञानेन्द्र व्यस्त छन्।
मध्य तराई भ्रमणको क्रममा रहेका ज्ञानेन्द्र प्रति गाउँका जनताको सहानुभूति बढ्न थालेको छ। ज्ञानेन्द्र पुगेको ठाउँमा “राजा आउ देश बचाउ” जस्ता नाराहरु समेत लाग्ने गरेका छन्। गणतन्त्र स्थापना पछि पनि नेपाली नेताहरुले जनताले चाहेको जस्तो विकास हुन नसक्दा अहिले सर्वसाधारणहरु राजतन्त्र तर्फ आकर्षित हुँदै गरेको धेरैले आकलन गर्न थालेका छन्।
मोफसलमा ज्ञानेन्द्र पुग्दा राजतन्त्रको समर्थनमा नारा-बाजी हुने मात्र नभई ठूलै जमात समेत जम्मा हुने गरेको छ। ज्ञानेन्द्र पोखरा भ्रमणमा हुँदा “चोकचोकमा हल्ला छ, राजा ल्याउने सललाह छ” भन्दै सर्वसाधारणले ज्ञानेन्द्रको स्वागत गरेका थिए। यसलाई अहिलेको शासनव्यवस्था प्रति जनताको वितृष्णाको रुपमा बुझिएको छ।
केहि समय अगाडि पोखरामा हुँदा ज्ञानेन्द्रले राप्रपाका नेताहरूसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए। भेटको क्रममा ज्ञानेन्द्र तीनै टुक्रा राप्रपा मिलेर जानु पर्ने निर्देशन दिएका थिए। गत हप्ता दुई राप्रपा बीच भएको एकता पनि ज्ञानेन्द्रकै निर्देशनमा भएको बताइन्छ। पशुतपति शम्शेर राणा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृृत्वको दुई राप्रपाबीच एकताको लागि ज्ञानेन्द्रलेनै पहल गरेका थिए।
राप्रपा मध्ये सबै भन्दा ठूलो मानिएको कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अहिले हिन्दु अभियानको क्रममा छ। अध्यक्ष थापा छिट्टै देश दौडाहमा निस्किँदै छन्। ज्ञानेन्द्र पनि अहिले देश दौडाहमै रहेको जस्तै देखिन्छ। यसलाई केहिले संयोग नभई थापा र ज्ञानेन्द्र बीच भएको सल्लाह भन्दै समेत विश्लेषण गर्छन्।
सरकार र राजनीतिक पार्टी प्रतिको वितृष्णानै पूर्वराजालाई फाइदाजनक भएको बताउनेहरु पनि भेटिन्छन्। जनता मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा पूर्व कार्यकर्ता समेत राजतन्त्र माग गर्दै विभिन्न अभियानमा जुटेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पक्ष्यधरहरुमा केहि आशावादी हुँदै गएका छन्।
प्रकाशित : बुधबार, माघ २३, २०७५११:००
भूकम्पपछि समयमै पुर्ननिर्माण गर्न नसक्दा घर भत्किएर ८५ वर्षीय वृद्धको मृत्यु !